ကာတွန်း ညီပုချေ – အရင်တုန်းကလို
ကာတွန်း ညီပုချေ – အရင်တုန်းကလို (မိုးမခ) သြဂုတ် ၁၈၊ ၂၀၁၇ Tags: ကာတွန်း ညီပုချေ
ခင်မောင်စော (ဘာလင်) – မြေနိမ့်ရာလှံစိုက် (ဝါ) ကုလသမဂ္ဂ၏ အနိုင်ကျင့်စော်ကားချက် (မိုးမခ) သြဂုတ် ၁၄၊ ၂၀၁၇ မြန်မာပြည်တွင်း၌ “လူ့အသိုင်းအဝိုင်း” တခုက ကောလဟာလ သတင်းများဖြန့်နေကြပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကို မြန်မာအစိုးရက မလိုက်နာသည့်အတွက် ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်ငံကိုအရေးယူမည်။ ဒေါ်စုအပါအဝင် အစိုးရ နှင့်တပ်မတော်ထိပ်ပိုင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ရာဇဝတ်မှုဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး တွင်တရားစွဲတော့မည် စသည်ဖြင့် လျှောက်ပြောနေကြပါသည်။ မည်သည့်”လူ့အသိုင်းအဝိုင်း”ဆို သည်ကိုတော့ နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်၏ သီချင်းစာသားပါအတိုင်း “ပညာရှိကြပါလျှင် အမှန်တွေးယူ” ကြပါတော့။ ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကို မြန်မာအစိုးရက လိုက်နာစရာမလိုပါ။ မလိုက်နာ၍လည်း ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကောင်စီက...
မောင်ရစ် – အမေရိကန်အိပ်မက်တွေရဲ့ ဈာပန လို့ ချောင်စကီးက ပြောလိုက်ပြီ (အတွေးအမြင် ၃၀၁၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၇) မိုးမခ၊ သြဂုတ် ၁၈၊ ၂၀၁၇ Noam Chomsky’s new film “Requiem for the American Dream” ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်မြင် ကြည့်ပြီးကြပြီလား။ အမေရိကန်အိပ်မက်များအတွက် ဈာပန လို့ ဘာသာပြန်ရမယ် ထင်တယ်။ ဈာပနဆိုတာထက် အသုဘရှုတယ်၊ အောက်မေ့ဘွယ် အခမ်းအနား ကျင်းပတယ်လို့ ဆိုမယ်။ ဈာပနဆိုတာက အသုဘအခမ်းအနားတခုလုံးကို ဆိုတာ။ အဲသည်မှာမှ အသုဘ မချခင်...
မြတ်ငြိမ်းရဲ့နိုင်ငံတကာဝတ္ထုတိုစုစည်းမှု (မိုးမခ)၊ သြဂုတ် ၁၈၊ ၂၀၁၇ ဘာသာပြန်၊ ပင်ကိုယ်ရေးနဲ့ တက်ကျမ်း စုစုပေါင်းစာအုပ် (၉၀) ခန့် ရေး သားခဲ့သူ ဆရာမြတ်ငြိမ်း ကွယ်လွန်ခြင်း တစ်နှစ်ပြည့်အမှတ်တရအဖြစ် သဟဇာတစာပေက ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ချက်ကော့၊ အိုဟင်နရီ၊ ဖရန့်အိုကွန်းနား၊ ဇိုရှင်ကို၊အိပ်ခ်ျအိပ်ခ်ျမန်ရို၊ ဟာနန်ဒိုတီးလက်ဇ်၊ ဘားတော့ဘရက်၊ လီလီကာနာကော့စ်၊ ဆိုဒါဘာ့ဂ်ျ ၊ ကမူး...
တူမောင်ညို ● မြွေအရေခွံလဲသလို အပြောင်းအလဲမျိုးလား (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၇၊ ၂၀၁၇ စစ်တပ်ဆိုတာ (ပဒေသရာဇ်၊ အရင်းရှင်၊ ဆိုရှယ်လစ်၊ ကွန်မြူနစ်) အစိုးရရဲ့ အစိတ်အပိုင်းသာဖြစ်တယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီး ဌာနတွေအနက် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာ စစ်တပ်ကို ထားရှိမြဲဖြစ်တယ်။ ဘယ်လိုအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်းခံမူက အစိုးရရဲ့အမိန့်ကို စစ်တပ်က နာခံရတာဖြစ်တယ်။ လက်ရှိ “၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဘောင်”...
မောင်မောင်စိုး ● ရခိုင်ပြည်နယ် ဘင်္ဂါလီအရေး – အပိုင်း (၆) (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၇၊ ၂၀၁၇ ● ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ရခိုင် ဘင်္ဂါလီအရေးအခင်း ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ရခိုင် ဘင်္ဂါလီအရေးအခင်းသည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် မေလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကျောက်နီမော်ကျေးရွာ၌ ရခိုင်အမျိုးသမီးငယ် မသီတာထွေး...
မျိုးတေဇာမောင် ● မီးခိုးခေါင်းတိုင် (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၇၊ ၂၁၇ ဖျော့တော့တဲ့ ဆည်းဆာနေရောင်အောက်မှာ တစ်ကိုယ်တည်းရပ်နေတယ် ဆံပင်နက်နက်တွေ လေကြောင့်လွင့်နေပေမယ့် ပိန်သွယ်တဲ့အရိပ်တစ်ခု ကတော့ ငြိမ်သက်စွာရပ်လို့ မြို့တော်တံတိုင်း အောက်ဘက်ဆီမှာ နည်းနည်းအေးပြီး၊ နည်းနည်း အထီးကျန်ဆန်တယ် ကျနော်ဟာ ပျံတက်သွားချင်နေတဲ့ မီးခိုးခေါင်းတိုင်။ ဦးခေါင်းကိုငုံ့ပြီး၊ ရှည်လျားတဲ့ ကျုံးကိုငေးကြည့်မိ ရေဟာ ကျုံးနှုတ်ခမ်းထိလျှံလို့၊ ကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ –adrop (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ သြဂုတ် ၁၇၊ ၂၀၁၇ No tags for this post.
လောကဓာတ်ခန်း သာဂိ – Office Application in the Cloud (27) အိမ်သုံး ကျောင်းသုံး ရုံးသုံး – GMail နဲ့ Google Office Application အခြေခံလမ်းညွှန် (မိုးမခ) သြဂုတ် ၁၇၊ ၂၀၁၇ Using multiple sheets တဖိုင်တည်းတွင် Google...
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္) – ဥာဏ်စမ်း (၁) (မိုးမခ) သြဂုတ် ၁၇၊ ၂၀၁၇ ဝက် နှင့် ကြက်တူရွေး အရေအတွက် မောင်ညိုသည် ဝက်များနှင့် ကြက်တူရွေး များကို မွေးထားသည်။ ၄င်းတို့၏ ခေါင်းအရေအတွက် မှာ ၁၅ ခု နှင့် ခြေထောက် အရေအတွက်မှာ ၅၀ ဖြစ်လျှ င်...
မောင်စွမ်းရည် – ချစ်ဦးညီနဲ့ တင်မိုး (မိုးမခ) သြဂုတ် ၁၇၊ ၂၀၁၇ အဖိုးကြီးမို့ ယောင်ယောင်မှားမှားနဲ့ ချစ်ဦးညိုကို “ချစ်ဦးညီ” လို့ ရေးလိုက်မိတာမဟုတ်ပါ။ ညီလေး တစ်ယောက်လိုချစ်လို့ “ချစ်ဦးညီ” ခေါ်တာပါပဲ။ ဒီလို “ချစ်ဦးညီ” လို့ သူ့ကို နာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့သူက တစ်ယောက်တည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘေးလူတွေက ရောယောင်ပြီး “ချစ်ဦးညီ” လို့ခေါ်ရင် မကြိုက်ပါ။...
လှကျော်ဇော ● ဝ တောင်တန်းက သစ္စာပန်းတခက် (ရဲဘော်အီလွတ် သို့မဟုတ် မစန်း) (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၆၊ ၂၀၁၇ အချိန်က ၁၉၈၄ ခုနှစ် အစောပိုင်းကာလ ….။ နေရာက ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ဗဟိုရုံးနဲ့အရှေ့မြောက်စစ်ဒေသတို့ရုံးစိုက်ရာပန်ဆန်း (ယခုအခေါ်-ပန်ခန်း)။ အဲဒီနေ့က ကျွန်မတို့ရဲ့အရှေ့မြောက်စစ်ဒေသဆေးရုံကြီးမှာ သတင်းတရပ်ပျံ့နှံ့လာပါတယ်။ ကိုနိုင်ဦးကြီး ဝတောင်ခရိုင်က ဝ အမျိုးသမီးလေးတယောက်နဲ့ လက်ထပ်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းပါ။ ရှေ့တန်းစစ်ဆင်ရေးတာဝန်တရပ်နဲ့...
ကျော်ဇံလှ (ကလေးဝ) ● နံနက်ခင်း သတင်း (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၆၊ ၂၀၁၇ မြစ်ကို ငေးမိတော့လည်း လတ်ဆတ်တဲ့ရေစီးတွေက အားကောင်းမောင်းသန် ။ ပြုစားမှုကင်းတဲ့ ကမ်းစပ်များဆီ လှိုင်းတွေက တဝုန်းဝုန်း ဝင်ဆောင့်။ ငါ ငေးရီနေမိတဲ့ နာရီများ အလှည့်ကျ မုန်တိုင်းများ တောထဲက ပြန်လာတဲ့ သားသတ်သမားများ။ ရေပြင်ကျယ် ထွက်ခွာသွားတဲ့...
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● အင်ဂိုလာ၊ အမေရိကန်၊ စင်ကာပူနဲ့ မြန်မာကမ်းလွန်ရေနံသင်္ဘောလုပ်ငန်း (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၆၊ ၂၀၁၇ • ကိုဇော်ပြောင် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ခြင်း စာရေးသူ ကိုဇော်ပြောင် ရန်ကုန်၊ အီမန်နျူရယ်အသင်းတော်အနီးက မိတ်ဆွေတဦးရဲ့ တိုက်ခန်းမှာစခန်းချပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄ သင်္ကြန်ပွဲမှာ ရန်ကုန်၊ ပုသိမ်၊ မော်လမြိုင်၊ စက်စဲ...
ယောဟန်အောင် ● သူခိုးတွေကြားထဲ ငါပြုတ်ကျတဲ့အခါ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၆၊ ၂၀၁၇ ညက ဘယ်မှာခေါင်းချခဲ့ပါလိမ့် မိုးလင်းနိုးထတော့ မြေကဖုန်းဆိုး သူခိုးတွေကြားထဲ ငါပြုတ်ကျနေခဲ့တယ်။ ငါကျောချမ်းသွားပေါ့ အသွင်မတူလို့ကတော့ ဒီနေရာက ပြန်လမ်းမရှိဘူး ဂျက်လန်ဒန် ပြုတ်ကျတဲ့ ချောက်ကမ်းပါးမျိုးလား သတိတရားကို ပြန်မွေး ငါဟာ တွေးခေါ်တတ်သူပါ ငါဟာ ပညာတတ်ပါ… အသွင်ယူနေထိုင်ရင်း သူတို့အရပ်ကို...
မင်းခိုင် ● ကျောက်ခေတ်ဦးမှာ တို့တတွေ … နေ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၆၊ ၂၀၁၇ ပညာရေးဆိုတာ ဘာလဲ၊ ပညာသင်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက် ရောင်စုံအဖြေတွေ ရှိပြီးသား၊ ကြားဖူးပြီးသား ပါ။ ဥပမာ နိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်ဖို့တို့၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရဖို့၊ အတတ်ပညာတခုခုကို နားလည် တတ်ကျွမ်းစေဖို့၊ စာရိတ္တကောင်းဖို့၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ဖို့ … စသည်စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။...
ကာတွန်း ဆွေသား ● နာမည်ပျက်တော့မယ် (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၆၊ ၂၀၁၇ Tags: ကာတွန်း ဆွေသား
လင်းငယ် ● ပညာတမူ၊ ယွန်းသူတို့ ဌာနေ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၆၊ ၂၀၁၇ “စစ်မှာတမူ နှမလေး မယ့်ထက်ဖြူကို ယူမလားတော်။ စစ်မှာ ယွန်းမ နှမလေး မယ့်ထက်လှကို ရမလားတော်” (၁) အခု ဒီမြို့ကို ရောက်နေခဲ့တာ တလလောက်ရှိပြီ။ ဒီမြို့ဆိုပေမယ့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ပြီးမှ တရားဝင်လာလို့ရတဲ့မြို့။ တိုင်းတပါးလို့ အလွယ်ခေါ်ရင်လည်း ရမှာပါ။...
တင်ဇော်လွင် – ဒေါက်တာရောဘတ်ကော့ (Robert Koch) တံဆိပ်ခေါင်းများ (မိုးမခ) သြဂုတ် ၁၆၊ ၂၀၁၇ “ဒီတလတော့ ငါ့တူကြီးကို တီဘီ(TB) ဆိုတဲ့ အဆုတ်နာရောဂါအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြစရာတွေ ရှိတယ်ကွ” ” ဟာ လွဲပါစေ ဖယ်ပါစေ ဦးလေးရာ။ ကြားရတာနဲ့တင် နှလုံးတုန် ရင်တုန် ရှိလိုက်တာ၊ လန့်သွားတာပဲ” ”...
ဇာနည်ဝင်း (Myanmar Now) ● ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအသုံးပြုမှုစောင့်ကြည့်ရန် ဒေါ်ညိုညိုသင်း တိုက်တွန်း (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၅၊ ၂၀၁၇ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဒေါ်ညိုညိုသင်း (ဓာတ်ပုံများ – ပြည့်ပြည့်/Myanmar Now) ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အသုံးပြုရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ခံမှု ရှိစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတို့ကို ဖိအားပေး၊ တွန်းအားပေး၊ ပညာပေး၊ စည်းရုံး၊...
ဇင်လင်း ● နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ပြည်သူလူထုကြား ယုံကြည်မှုရှိမှ နိုင်ငံတိုးတက်နိုင်မည် (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၅၊ ၂ဝ၁၇ ယခုတလောတွင် ပြည်သူလူထုအကြား လက်ရှိအစိုးရအပေါ် ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေရန်၊ အကြည်ညိုပျက်စေရန်၊ ပြော ဆို လှုံ့ဆော်မှုများ ခပ်စိပ်စိပ်တွေ့နေရသည်။ သို့သော်လည်း ခြေခြေမြစ်မြစ်မဟုတ်သည့် အချက်အလက်များကို အခြေခံ ပြောဆိုနေသည်က များသဖြင့် ပြည်သူလူထုအများစု၏ ထောက်ခံမှုကိုကား ယိမ်းယိုင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း...
မောင်ရင်ငတေ ● အမ်ဝမ်း အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်က အဝါရောင် ရေဂျီယိုဂျက် (ပင်လယ်မရှိသောမြေသို့ စာစုများ) (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၅၊ ၂၀၁၇ ကားကြီးဂိတ်ဝင်းထဲ တပတ်ပတ်ရှာမေး၊ သူတို့ လမ်းညွှန်ချက်အရ လမ်းတဘက်ကိုကူး လိုက်ပို့လေ သူတွေနဲ့ ပိုက်စိတ်တိုက် လိုက်ရှာလိုက်တော့ မိုင်ဝက်လောက်ပတ်မိမှ ရှာတွေ့ပါတယ်။ ကားဂိတ်ကို၊ တကယ့်ကားဂိတ်ဝင်းကြီးထဲမှာ ဂိတ်မရှိတဲ့ အဝါရောင် ရေဂျီယိုဂျက်...
မိုးမခ သြဂတ်စ် ထွက်ပြီ သြဂတ်စ် ၁၅၊ ၂၀၁၇ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ကလောင်ရှင်တွေရဲ့ သုတ၊ ရသအစုံအလင်အနဲ့အတူ မုိုးမခလစဉ်ထုတ်မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၈၊ ၂၀၁၇ ကို ထွက်ရှိပါပြီ။ မိုးမခ မဂ္ဂဇင်း လစဉ်ထုတ်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံ ဘယ်နေရာက မဆို ဖုန်းဆက် မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ပို့ခ၊ ဝန်ဆောင်ခ...
ဆောင်းယွန်းလ ● မမြင် မခင် မကြင်ပဲ လွမ်း (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၅၊ ၂၀၁၇ မထားတတ်တဲ့စိတ်က ကျဉ်းနေတော့ ချောင်းကလေး ထားရာမှာ အေးအေးမနေနိူင်ဘူး ထားတတ်တဲ့ စိတ်က ကျယ်ဝန်းနေတဲ့အခါ ပင်လယ်ပြာ စေရာကို သွားနိုင်တယ် ပန်းသတင်းကိုလည်း လေညှင်းဆောင်ရဲ့ လူသတင်းကိုလည်း လူချင်းဆောင်ခဲ့ဆိုလေတော့ လူကို လူချင်းလွမ်းတာ ဆန်းသလား ကက်ဆက်ထဲ...
ကိုသန်းလွင် ● မလေးရှားအတိုက်အခံ အင်အားစု (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၄၊ ၂၀၁၇ (၁) မလေးရှားတွင် အတိုက်အခံဆိုသည်မှာ မရှိမဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားရခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အစိုးရအနေဖြင့် မှုစရာမလိုခဲ့ပေ၊။ ယခု အခါဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မဟာသီယာ (Mahathir Muhamad) ပါဝင်သော အတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းတခုကို ဖွဲ့စည်း နိုင် ခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်။ သူ၏လက်ထောက်ဟောင်း အန်ဝါအီဗရာဟင် (Anwar Ibrahim)...
ကျော်ထင် ● တောတွေလည်းပြုန်း၍ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၄၊ ၂ဝ၁၇ (၁) မရွယ်ဘဲ စောကဲ မင်းဖြစ်တဲ့။ ဒီစကားပုံဟာလေ ကျနော့်အတွက်တော့ မှန်လွန်းတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ ကျောင်းဆရာဘဝကို မရည်ရွယ်ဘဲ ရခဲ့တယ်။ လုပ်စကတော့ စိတ်ပါလှတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းက အကူအညီတောင်းတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ ကျောင်းလေးမှာ လိုအပ်တဲ့ဘာသာပြအဖြစ် ဝင်သင်လိုက်တာ။ အဲ့ဒါကနေ ကျောင်းဆရာဘဝ စတော့တာပါပဲ။...
ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ ● လာလီပေါပ့်များနှင့် နေထိုင်ခြင်း (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၄၊ ၂၀၁၇ ငါဟာ ငါမှဟုတ်ရဲ့လားလို့ တွေးချိန်မရဘူး လာလီပေါပ့်တွေ အထပ်လိုက် ဒါ အပျင်းဖြေစရာကစားနည်းတခုဖြစ်မယ်ဆိုတာ ရိပ်မိတယ် သေချာအောင် အတည်ပြုလို့မရ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းပေါ်က ကုလားထိုင်တခုမှာ ငါရောက်နေတယ် လာလီပေါပ့်တချောင်းကို ကောက်လိုက်တော့ ရှေ့က နောက်ခံတွေဟာ ပြောင်းသွား မြို့ဟာ မျက်စိစမ်းသပ်မှုခံယူဖို့ တန်းစီနေတဲ့ပုံစံ...
ကာတွန်း နေညိုအေး (ဥသျှစ်ပင်) ● ပြည်သူ့ပိုက်ဆံ ပေါ်တင် ခိုးတဲ့ကောင်တွေ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၄၊ ၂၀၁၇ Tags: ကာတွန်း နေညိုအေး (ဥသျှစ်ပင်)
မောင်မောင်စိုး ● ရခိုင်ပြည်နယ် ဘင်္ဂါလီအရေး – အပိုင်း (၅)
မောင်မောင်စိုး ● ရခိုင်ပြည်နယ် ဘင်္ဂါလီအရေး – အပိုင်း (၅) (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၄၊ ၂၀၁၇ ● ၁၉၄၂ ခုနှစ် ရခိုင် ဘင်္ဂါလီအရေးအခင်း ဂျိမ်းဘက်စ်တာ အစီရင်ခံစာထွက်လာသော်လည်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လာ၍ အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ခြင်း မပြုနိုင်သည့် ပြင် အင်္ဂလိပ်တို့သည် ဂျပန်နှင့်ပေါင်း၍ ၎င်းတို့အားတော်လှန်ကြသည့် မြန်မာပြည်မှ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအား လုံးဝ အယုံအကြည်မရှိတော့ပေ။ ...
လင်းသက်ငြိမ် ● ရေကြီးချိန် အမှတ်တရများ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၄၊ ၂ဝ၁၇ မနေ့ညက မိုးတွေရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက် အိမ်ရှေ့မြောင်းထဲမှာ ရေတွေတိုးလာတယ်။ ဒေါင်းမြူးချောင်း ရေလျှံ နေခြင်းဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်။ မိုးရာသီ ရေကြီးရေလျှံခြင်းမှာ ကျွန်တော်တို့အတွက် မထူးဆန်းသောကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ မြောင်းထဲကနေ အိမ်ဝင်းထဲ တရွေ့ရွေ့တိုးဝင်လာတဲ့ ရေဝါဝါတွေကိုကြည့်ရင်း ငယ်ငယ်က ရေကြီးချိန်တွေကိုသတိရလာမိ။ အိမ်ခေါင်းမိုး မြုပ်လုမြုပ်ခင် အထိ...
Page 1 of 84512345...845»
>Internet Speed &amp; Japanese Ship
>Zaw Ye Win
>ူမန်မာူပည်တငြ်းရေးရာ သတင်းတိုထြာ - ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇
Join 87,970 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month August 2017 (105) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
ကာတွန်း ညီပုချေ – အရင်တုန်းကလို https://t.co/fzejuLqAgB https://t.co/K4ZfxgMIT8 about 18 hours ago ReplyRetweetFavorite
ခင်မောင်စော (ဘာလင်) – မြေနိမ့်ရာလှံစိုက် (ဝါ) ကုလသမဂ္ဂ၏ အနိုင်ကျင့်စော်ကားချက် https://t.co/cPbOX4LElL https://t.co/Wd5vFXaLCT about 19 hours ago ReplyRetweetFavorite
မောင်ရစ် – အမေရိကန်အိပ်မက်တွေရဲ့ ဈာပန လို့ ချောင်စကီးက ပြောလိုက်ပြီ https://t.co/5vmvqpf5Ny https://t.co/KZEpGGf7j5 about 19 hours ago ReplyRetweetFavorite
စာအုပ်သတင်း- မြတ်ငြိမ်းရဲ့ နိုင်ငံတကာ ဝတ္ထုတိုစုစည်းမှု https://t.co/5e6sDNJJ4a about 21 hours ago ReplyRetweetFavorite
တူမောင်ညို ● မြွေအရေခွံလဲသလို အပြောင်းအလဲမျိုးလား https://t.co/oHIKfqWwdK https://t.co/BoAhTbEMre 03:48:55 PM August 17, 2017 ReplyRetweetFavorite
မိုးမခ လစဉ်ထုတ်မဂ္ဂဇင်း သြဂတ်စ် ၂၀၁၇ ထွက်ပြီ
About MoeMaKa (76)
ခရီးသွား ဆောင်းပါး (58)
Ni July (28)
ကာတွန်း – အောင်မော် (110)
ကာတွန်း ၀င်းအောင် (35)
ကာတွန်း ATH (183)
ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း (47)
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္) (63)
မိုးမခကို ပေးတဲ့စာ (262)
ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ (204)
သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ (931)
လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ (356)
Cartoon Box (3,083)
မိုးမခမဂ္ဂဇင်း ဇွန်လထုတ် အသစ် ဝန်ဇင်းမှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ (မိုးမခစာအုပ်စင်) ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၇...
မိုးမခ မဂ္ဂဇင်း မေလထုတ် အသစ် ဝန်ဇင်းတွင် ရပြီ (မိုးမခ) မေ...
စိုးလွင် (၂၁၁) (ဝမ်ခ) ရဲ့ “ဝမ်ခ (ဟောင်း) တိုက်ပွဲ နှင့်...
yekyawthu on ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● အင်ဂိုလာ၊ အမေရိကန်၊ စင်ကာပူနဲ့ မြန်မာကမ်းလွန်ရေနံသင်္ဘောလုပ်ငန်း
Ba Ba Gyi on မောင်မောင်စိုး ● ရခိုင်ပြည်နယ် ဘင်္ဂါလီအရေး – အပိုင်း (၄)
Zaw Aung on ကျော်ဝင်း – ဘဝ မာတိကာ နိုင်ငံရေး မာတိကာ – နှင့် မဟာဗျူဟာ မာတိကာများ
Ba Ba Gyi on ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္) – THE RIGHT WORD 3
Catwoman on အရှင်ဇဝန (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း) – အနန္တစကြာဝဠာတို့ ပြိုလဲခန်း